N'ime afọ ndị gafeworonụ, etinyere m ma jikọta ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi ọha maka ndị ahịa. Mụ na ọtụtụ ndị ka na-enwe mmekọrịta dị ukwuu ma ị na-aga n'ihu ịhụ ka m na-akwalite nyiwe ọhụrụ na ndị dị adị. Nke ahụ nwere ike mgbagwoju anya na-agụ… na-eche ihe mere m na-adịghị nnọọ ike ikwu na inupụ otu ikpo okwu maka onye ọ bụla. Anaghị m n'ihi na mkpa ọ bụla nke ụlọ ọrụ ọ bụla dị iche na ibe ya.
Enwere plethora nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta nke nwere ike inyere azụmaahịa aka… mana ebumnuche gị, atụmatụ, ndị na-ege ntị, asọmpi, usoro, talent, mmefu ego, usoro iheomume, ndị ọzọ nyiwe na gị tojupụtara… niile na-arụ nnukwu ọrụ na-ere na ị nwere ike kasị mma nweta a nloghachi na ego si. Ọ bụ ya mere ihe mgbaru ọsọ dị na mkpado nke Martech Zone bụ nyocha, mụta na ịchọpụta. Enweghị m ike ịhọpụta ihe ngwọta n'usoro ruo mgbe m ghọtara azụmahịa gị. Right ngwọta n'ihi na azụmahịa gị nwere ike ịbụ ihe megidere ihe m ga-akwado maka ọzọ.
SocialBee: Maka Solopreneurs, obere azụmaahịa na ụlọ ọrụ na-ejere ha ozi
SocialBee bụ usoro nchịkwa mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya na ịkekọrịta site na ọwa mmekọrịta. Ụlọ ọrụ ahụ pụrụ iche n'ihi na ikpo okwu na-abịa na ọzụzụ na ọrụ concierge nhọrọ iji nyere ndị solopreneur, obere azụmahịa na ụlọ ọrụ na-ejere ha ozi aka. Ọ bụghị naanị na ị na-enweta ikpo okwu, mana ị nwekwara ike ịgbakwunye ndị ọkachamara raara onwe ha nye ka ha nyere gị aka ịmepụta ọdịnaya, mgbasa ozi, uto obodo na ndị ọzọ.
Nchịkọta SocialBee Platform
Nkekọrịta ọdịnaya na-elekwasị anya n'ime SocialBee dị nnọọ pụrụ iche, atụmatụ gụnyere:
Otudị ọdịnaya mgbasa ozi ọha - ngalaba na-enyere gị aka ịhazi posts ka ị nweta ngwakọta nke ọdịnaya ka mma ma nye gị njikwa nhazi oge, ịhazi maka netwọkụ ọ bụla, imepụta ụdị dị iche iche, ndezi nnukwu na ịdegharị kwụ n'ahịrị. Ị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ mee otu edemede akọwapụtara.
Mbipụta Social Media - chepụta ma hụchalụ mgbasa ozi mmekọrịta gị na hashtags echekwara site na profaịlụ ma ọ bụ ikpo okwu. Ikpo okwu na-akwadokwa emojis ka ọ pụta ìhè. Ị nwere ike ibubata posts site na CSV, RSS, Ntu, ma ọ bụ n'akpa uwe.
Mmekọrịta Social Media - Bipụta na profaịlụ Facebook gị, ibe na otu gị. Bipụta na Twitter. Bipụta na profaịlụ LinkedIn gị na ibe ụlọ ọrụ gị. Bipute foto, carousels ma ọ bụ vidiyo na Instagram. Bipute na Google My Business.
Usoro ihe omume na-elekọta mmadụ - Lelee kalenda gị, biputere n'oge a kapịrị ọnụ, nkwubi okwu agwụla n'otu ụbọchị ma ọ bụ mgbe ọnụọgụ nke oke gachara. Nhazi oge n'otu n'otu dabere na profaịlụ ọ bụla.
email Ịma Ọkwa – mara ọkwa mgbe posts dara, mgbe mbubata zuru ezu, ma ọ bụ mgbe kwụ n'ahịrị udi gị tọgbọ chakoo.
Nchịkọta - jikọta URL mkpụmkpụ (Rebrandly, Bitly, RocketLink, JotURL, Replug, PixelMe, BL.INK) na ụdị dabere Ntọala UTM iji soro arụmọrụ ọdịnaya gị.
Akwụkwọ A SocialBee ngosi
Nke a bụ ntụle vidiyo nke ikpo okwu:
Ọrụ SocialBee Concierge
Ma ị na-ejikwa nke gị usoro mgbasa ozi ọha na eze ma ọ bụ atụmatụ ndị ahịa gị, SocialBee na-enye ọtụtụ ngwugwu ọrụ mgbasa ozi ọha na eze kwa ọnwa, gụnyere:
Okike ọdịnaya mmekọrịta -Social media bụ akụkụ dị oke mkpa nke ịre ahịa gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ilebara anya ma wulite mmata. Nzọụkwụ mbụ iji wuo ọnụnọ siri ike na mgbasa ozi ọha na eze bụ ịkekọrịta ọdịnaya dị elu na nke na-adọrọ adọrọ mgbe niile.
content Marketing - Ịmepụta ọdịnaya na-enyere gị aka ịmepụta mmekọrịta na ịmepụta ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na ndị ahịa na atụmanya gị ugbu a. Ọzọkwa, ọdịnaya emere nke ọma na-ebute okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị wee bụrụ isi ihe na-eme usoro ọgbọ ndu gị.
Uto etinyere aka - Ịkwalite mmekọrịta 1-na-1 iji wuo obodo gburugburu azụmahịa gị na-akwụ ụgwọ! Obodo abụghị naanị ezigbo isi iyi nke nzaghachi kamakwa ọ bụrụ na ewuru ya nke ọma, ị nwere ike ịtụgharị ndị na-ege gị ntị ka ha bụrụ ndị ahịa na-akwụ ụgwọ ma emesia na ndị na-akwado ntụkwasị obi.
Nnweta na mmụba - Mgbalị mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụghị naanị na-ebuli elu gị wee mee ka ị kesaa ozi gị n'ọtụtụ ọwa, mana ha dabara na mmefu ego ọ bụla ma dị mfe ịlele. Na mgbakwunye, ị ga-enweta akara nlebara anya akọwapụtara.
Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ naanị enyemaka na ịmalite, SocialBee na-enye ngwugwu ego efu iji kwaga ọdịnaya gị niile gaa na ya. SocialBee ma ọ bụ na ị na-achọ ịmalite ọhụrụ, anyị nwere ike inyere gị aka na nhazi mbụ. Site na ịnyefe ọdịnaya gị niile na ntọala ndị gara aga na SocialBee, iji tinye usoro maka gị, ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi!
Mụtakwuo maka ọrụ SocialBee
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka SocialBee na m na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: bitlyAKWỤKWỌcontent Marketingọrụ ahịa ọdịnayacsv na social mediaFacebookÒtù FacebookFacebook otu mbipụtafacebook peeji nkeBipụta ibe FacebookNkọwa Facebookgoogle azụmahịa mgoogle m azụmahịa mbipụtainstagraminstagram bipụtaraJotURLụlọ ọrụ linkinebipụta peeji nke ụlọ ọrụ linkedinPixelMen'akpa uwequuuNchikotaTinyegharịaRocketLinkRSSobere azụmahịaobere ụlọ ọrụ azụmahịamgbasa mgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ media ọdịnaya e kere ekeuto mgbasa ozi mgbasa ozimgbakwunye mgbasa ozi na-elekọta mmadụmgbasa ozi mgbasa oziusoro mgbasa oziọrụ mgbasa ozi ọhausoro mgbasa ozi ọha na ezeọzụzụ mgbasa ozi mmekọrịtasocialbeeTwitterurl mkpumkpu
WP Niile Mbubata: Otu esi ebubata udi taxonomy n'ime WordPress site na CSV